Ahene Nhoma a Ɛto So Abien 9:1-37
Wɔsraa Yehu sii no hene wɔ Israel so (1-13)
Yehu kum Yehoram ne Ahasia (14-29)
Wokum Yesebel; nkraman bedii ne nam (30-37)
9 Ɛnna odiyifo Elisa frɛɛ adiyifo mma no baako ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa ntama kyekyere w’asen, na yɛ ntɛm fa ngo toa yi kɔ Ramot-Gilead.+ 2 Sɛ wudu hɔ a, hwehwɛ Nimsi ba Yehosafat ba Yehu+ wɔ hɔ; kɔ ne nkyɛn na ma ɔnsɔre mfi ne nuanom mu, na fa no kɔ pia mu. 3 Afei fa ngo toa no na hwie ngo no gu ne tirim, na ka sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Masra wo asi wo hene wɔ Israel so.”’+ Wuwie a, bue pon no na guan fi hɔ ntɛm.” 4 Enti odiyifo no somfo sii kwan so kɔɔ Ramot-Gilead. 5 Bere a oduu hɔ no, na asahene no tete hɔ, na ɔkae sɛ: “Ɔsahene, mepɛ sɛ meka asɛm bi kyerɛ wo.” Ɛnna Yehu bisaa no sɛ: “Yɛn mu hena?” Na ɔkae sɛ: “Ɔsahene, ɛyɛ w’ankasa.” 6 Enti Yehu sɔre kɔɔ ofie hɔ, na ɔsomfo no hwiee ngo no guu ne tirim, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, “Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni: ‘Masra wo asi wo hene wɔ Yehowa man Israel so.+ 7 Kunkum wo wura Ahab fifo, na mɛma Yesebel atua me nkoa adiyifo no ne Yehowa nkoa a okunkum wɔn no nyinaa mogya ho ka.+ 8 Na Ahab fifo nyinaa bewuwu; ɔbarima* biara a ɔwɔ Ahab fi no, mekum no, Israel nipahunu a wɔmfa no nyɛ hwee mpo, mekum no.+ 9 Na mɛsɛe Ahab fi sɛnea mesɛee Nebat ba Yeroboam+ fi ne Ahiya ba Baasa+ fi no. 10 Na Yesebel de, nkraman na ebedi ne nam wɔ Yesreel asaase no so,+ na obiara rensie no.’” Ɔkaa saa no, obuee pon no guanee.+ 11 Bere a Yehu san kɔɔ ne wura nkoa no nkyɛn no, wobisaa no sɛ: “Biribiara yɛ bɔkɔɔ anaa? Adɛn nti na ɔbɔdamfo yi baa wo nkyɛn?” Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo ara munim ɔbarima yi ne sɛnea ɔkeka ne nsɛm.” 12 Nanso wɔkae sɛ: “Ɛnyɛ nokware! Yɛsrɛ wo, nea ɔkae no, ka kyerɛ yɛn.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Nea ɔka kyerɛɛ me ni, ɛnna ɔka kaa ho sɛ, ‘Nea Yehowa aka ne sɛ: “Masra wo asi wo hene wɔ Israel so.”’”+ 13 Ɛhɔ ara na wɔn nyinaa yɛɛ ntɛm yiyii wɔn ntama, na wɔde sesɛw fam wɔ stɛps no so maa no,+ na wɔbɔɔ abɛn kae sɛ: “Yehu abɛyɛ ɔhene!”+ 14 Ɛnna Nimsi ba Yehosafat ba Yehu+ bɔɔ Yehoram ho pɔw. Saa bere no, Siria hene Hasael+ nti, na Yehoram ne Israel nyinaa rebɔ Ramot-Gilead+ ho ban. 15 Akyiri yi, Ɔhene Yehoram san kɔɔ Yesreel+ sɛ ɔrekɔsa ne ho yare, efisɛ bere a ɔne Siria hene Hasael kɔkoe no,+ Siriafo piraa no. Afei Yehu kae sɛ: “Sɛ mowɔ m’afã* a, ɛnde mommma obiara nnguan mmfi kurow no mu nnkɔbɔ amanneɛ wɔ Yesreel.” 16 Ɛnna Yehu tenaa ne teaseɛnam mu kɔɔ Yesreel, efisɛ na Yehoram apira da hɔ, na Yuda hene Ahasia nso kɔ hɔ sɛ ɔrekɔhwɛ Yehoram. 17 Ná ɔwɛmfo gyina Yesreel aban no so, na ohui sɛ Yehu ne ne dɔm reba. Ɛhɔ ara na ɔkae sɛ: “Mihu nnipadɔm bi sɛ wɔreba.” Yehoram kae sɛ: “Soma ɔpɔnkɔsotefo ma onkohyia wɔn na ommisa sɛ, ‘Wode asomdwoe na ɛnam anaa?’” 18 Enti obi a ɔte ɔpɔnkɔ so kohyiaa no na ɔkae sɛ: “Nea ɔhene aka ni, ‘Wode asomdwoe na ɛnam anaa?’” Ɛnna Yehu kae sɛ: “Wunim nea wɔfrɛ no ‘asomdwoe’? Dan wo ho bedi m’akyi!” Ɛnna ɔwɛmfo no bɔɔ amanneɛ sɛ: “Ɔbɔfo no koduu wɔn nkyɛn nanso wansan amma.” 19 Enti ɔsomaa ɔpɔnkɔsotefo a ɔto so abien, na oduu wɔn nkyɛn no, ɔkae sɛ: “Nea ɔhene aka ni, ‘Wode asomdwoe na ɛnam anaa?’” Ɛnna Yehu kae sɛ: “Wunim nea wɔfrɛ no ‘asomdwoe’? Dan wo ho bedi m’akyi!” 20 Ɛnna ɔwɛmfo no bɔɔ amanneɛ sɛ: “Okoduu wɔn nkyɛn nanso wansan amma, na mehwɛ sɛnea teaseɛnam no reba no a, ɛte sɛ nea Nimsi banana* Yehu na ɔreka; ɔka no sɛnea wabɔ dam.” 21 Ɛnna Yehoram kae sɛ: “Siesie teaseɛnam no!” Enti wosiesiee teaseɛnam a ɔde kɔ ɔko no maa no, na Israel hene Yehoram ne Yuda hene Ahasia+ tenatenaa wɔn nteaseɛnam mu sɛ wɔrekohyia Yehu. Wɔkɔtoo no wɔ Yesreelni Nabot asaase+ no so. 22 Bere a Yehoram huu Yehu no, ntɛm ara na ɔkae sɛ: “Yehu, wode asomdwoe na ɛnam anaa?” Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Bere a wo maame Yesebel+ aguamammɔ ne n’asumansɛm+ bebrebe no da so wɔ hɔ yi, ɛbɛyɛ dɛn na asomdwoe aba?” 23 Ntɛm ara na Yehoram dan ne ho sɛ ɔreguan, na ɔka kyerɛɛ Ahasia sɛ: “Ahasia, wanya yɛn!” 24 Ɛnna Yehu twee agyan tow wɔɔ Yehoram akyi ma ekopuee ne komam, na otwa hwee ne teaseɛnam no mu. 25 Afei ɔka kyerɛɛ ne boafo Bidkar sɛ: “Ma no so tow no kyene Yesreelni Nabot+ asaase no so. Kae sɛ me ne wo nyinaa na na yɛka teaseɛnam di ne papa Ahab akyi bere a Yehowa kaa atemmusɛm yi tiaa no sɛ:+ 26 ‘“Ampa, nnɛra mihuu Nabot mogya+ ne ne mma mogya,” Yehowa asɛm ni, “asaase yi ara so na metua wo ka,”+ Yehowa asɛm ni.’ Enti ma no so tow no kyene asaase no so sɛnea Yehowa kae no.”+ 27 Bere a Yuda hene Ahasia+ huu nea ɛrekɔ no, oguan faa turo fi kwan no so. (Akyiri yi, Yehu tiw no, na ɔkae sɛ: “Munkum ɔno nso!” Enti bere a ɔte teaseɛnam mu rekɔ Gur a ɛbɛn Yibleam+ no, wopiraa no. Nanso ɔtoaa so ara koduu Megido, na owui wɔ hɔ. 28 Ɛnna ne nkoa de no too teaseɛnam mu kɔɔ Yerusalem, na wosiee no wɔ ne damoa mu kaa n’agyanom ho wɔ Dawid Kurow+ mu. 29 Ahab ba Yehoram ahenni afe a ɛto so 11 mu na Ahasia+ bedii Yuda so hene.) 30 Bere a Yehu beduu Yesreel+ no, Yesebel+ tee. Enti ɔde adubiri kekaa n’ani akyi, na osiesiee ne ti ho, na ogyinaa mfɛnsere mu hwɛɛ fam. 31 Bere a Yehu wuraa kurow no pon mu bae no, ɔbea no bisaa no sɛ: “Simri a okum ne wura no, esii no yiye anaa?”+ 32 Ɛnna ɔno nso maa n’ani so hwɛɛ mfɛnsere no mu, na obisae sɛ: “Hena na ɔwɔ m’afã? Hena?”+ Ɛhɔ ara na nhenkwaa baanu anaa baasa begyinaa hɔ hwɛɛ no wɔ fam hɔ. 33 Ɔkae sɛ: “Montow no nhwe fam!” Enti wɔtow no hwee fam, na ne mogya no bi bɔ petee ɔfasu no ne apɔnkɔ no ho, na n’apɔnkɔ no tiatiaa no so. 34 Afei ɔkɔɔ mu kodidii na ɔnomee, na ɔkae sɛ: “Mesrɛ mo, monkɔfa ɔbea busuyɛfo no na munsie no. Anyɛ hwee koraa ɔyɛ ɔhene babea.”+ 35 Nanso bere a wɔkɔe sɛ wɔrekosie no no, wɔanhu ne ho hwee sɛ ne tikora ne ne nan ase ne ne nsayam.+ 36 Bere a wɔsan bɛbɔɔ no amanneɛ no, ɔkae sɛ: “Yehowa asɛm a ɔnam n’akoa Tisbini Elia so kae no na aba mu+ no. Ɔkae sɛ, ‘Nkraman na ebedi Yesebel nam wɔ Yesreel asaase no so.+ 37 Na Yesebel funu bɛyɛ sɛ sumina* wɔ Yesreel asaase no so, sɛnea ɛbɛyɛ a obi renka sɛ: “Yesebel ni.”’”
^ Anaa “mo kra wɔ m’afã.”
^ Nt., “ba.”